Mpanoratra YouTube maimaim-poana | Hividy Mpandray anjara amin'ny YouTube
Ny Serivisy Premium
Vidio ny fanatsarana ny YouTube
Serivisy #1 hampitomboana ny fantsona YouTube anao miaraka amin'ny olona tena izy, haingana!
SubPals dia sehatra fitomboan'ny mpanjifa YouTube maimaim-poana natao hanombohana ny fantsonao amin'ny alàlan'ny fandraisana anjara amin'ny olona tena izy! Atombohy izao ny dianao fitomboana.
Toe-javatra manan-danja amin'ny serivisy ana ho an'ny mpanjifa maimaimpoana YouTube
SubPals dia manolotra tambajotra mahomby izay ahafahanao mandray mpanjifa vaovao 10 maimaim-poana amin'ny YouTube mandritra ny 12 ora! Maimaimpoana ny serivisy ary misy safidy lafo karama tena lafo ho an'ireo maniry mpanjifa bebe kokoa isan'andro.
SubPals dia natao mba ho tsotra araka izay azo atao amin'ny olombelona! Zava-dehibe ny fotoananao ary azonay ny, noho izany dia namolavola ny tambajotra izahay hanome anao mpanjifa YouTube maimaim-poana 10+ mandritra ny minitra vitsy monja.
Ny tamba-jotra famandrihana maimaimpoana eto aminay dia manome fifanakalozana eo aminao sy YouTubers hafa mitady hampiakatra ny mpanjifany, ka hahazo famandrihana avy amin'ny tompona fantsona YouTube hafa ianao. Fomba iray mahomby hampahazoana kokoa ny mpanjifa ao amin'ny YouTube!
Ny fampiasana SubPals handraisana ny mpanjifanao YouTube maimaim-poana dia azo antoka 100% ho an'ny kaontinao YouTube. Mahatsiaro tena matoky ianao fa ny tamba-jotra misy anay dia azo antoka sy ampiasaina amin'ny fotoana rehetra.
Valiny azonao jerena
Rehefa manangana drafitra maimaim-poana na fandoavam-bola ho an'ny fantsona anao ianao dia hahita ny isan'ny mpanjifa fantsona anao manomboka mitombo amin'io andro io ihany! Ny drafitra rehetra dia manomboka miasa haingana hampitomboana ny fahatokisan'ny fantsona anao sy ny fampielezana azy.
Ny ekipa namanay eto mba hanampy! Raha manana fanontaniana ianao na mila fanampiana amin'ny zavatra rehetra, dia mailaka fotsiny izahay. Rehefa mifandray aminay ianao dia afaka manantena valiny ara-potoana foana.
Dingana tsotra Fahazoana ny famandrihana maimaim-poana
Misoratra anarana sy toy ny horonan-tsary
60 segondra taty aoriana, vita ianao!
Mipetraha & raiso ny mpanjifa maimaimpoana
Te-hisoratra anarana amin'ny famandrihana maimaim-poana aho izao
10 amin'ireo tombantonga lehibe indrindra an'ny mpanjifa amin'ny YouTube maimaimpoana
Ny zavatra tsara indrindra amin'ny fiainana dia afaka; ary miaraka amin'ny fiakaran'ny media sosialy, inona no tsara kokoa noho ny mpanjifanao YouTube maimaim-poana? Eny, azonao atao ny milaza anarana farafaharatsiny vitsivitsy izay tsara kokoa; fa ny dikany, ny manaraka ao amin'ny tranonkala media sosialy, toa ny YouTube dia mihamalalaka hatrany amin'ny tontolon'ny ankehitriny.
“Manana atiny tena lehibe be ny YouTube. Ary tena misy zavatra ho an'ny rehetra izany. Ary manatona ahy foana ny olona ary miresaka amiko momba ny nanovan'ny YouTube ny fiainany, ny fomba nahafahan'izy ireo nianatra zavatra izay tsy noeritreretin'izy ireo ho azony. ”
Dimy miliara. Io no isan'ny horonantsary YouTube izay nozaraina tao amin'ilay tranonkala hatramin'izao. Hatramin'ny niorenany tamin'ny 14 Febroary 2005, ny sehatra fizarana horonantsary malaza dia nanohy nanintona ireo mpampiasa vaovao izay miteraka atiny haingana be. Ny fifankatiavana eran'izao tontolo izao amin'ny YouTube dia tsy hoe noforonina tamin'ny andron'ny mpifankatia. Mora ny mahatakatra ny antony nahatonga azy io ho fitaovana tena ilaina mba hijanonan'ny mpampiasa fifandraisana sy hilazana vaovao hatrany.
Raha ny marina, raha ny filazan'ny Pew Research Center dia mihoatra ny 20% amin'ireo olon-dehibe no nanondro fa mampiasa YouTube ho loharanom-baovao tsy tapaka izy ireo. Izany no mahatonga ny YouTube ho tranonkala media sosialy efa be mpampiasa indrindra ho an'ny vaovao, ao ambadiky ny Facebook, izay miakatra 43% amin'ireo mpampiasa olon-dehibe no milaza fa mahazo ny filazany. Ny tena marina, hoy i Omnicore, 75% an'ny millennial dia aleony mijery horonan-tsary YouTube amin'ny fahitana fahitalavitra mahazatra.
Inona, inona no ifandraisan'ny olona ny vaovaony, ary misy ifandraisany amin'ny mpanaraka YouTube maimaim-poana? Eny, tsara raha manana fahatakarana feno momba ny fiantraikan'ny YouTube amin'ny kolontsaintsika, sy ny fomba itondran'ny kolontsaintsika ny vaovao. Amin'izany fahalalana izany dia ho afaka hahatratra ny mpihaino anao amin'ny fomba mahomby ianao.
Ny antontan'isa no manaporofo fa mihamaro hatrany ny olona mitodika any amin'ny tranonkala toa an'i YouTube hianatra momba ny zava-mitranga eto amin'izao tontolo izao, fa tsy mijanona eo. Ireo mpampiasa YouTube dia mianatra ireo karazana fampahalalana rehetra momba ny zava-drehetra amin'ny fomba fametrahana fiatra maivana, amin'ny fomba famolavolana haingo. Saingy izao, mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay, ireo mpampiasa YouTube dia mijery lahatsary YouTube hianatra momba ny orinasa sy marika.
Toerana mety indrindra hampiroboroboana ny orinasanao. Ny tantara an-tsarimihetsika dia manolotra an'io fitambaran'ny fampahalalam-baovao sy fialamboly io, ary ny horonan-tsary dia manolotra fampahalalana lehibe indrindra amin'ny fotoana fohy indrindra. Amin'ny alàlan'ny YouTube, mila aseho amin'ny mpihaino anao ny fijerena manokana ny kolontsain'ny orinasa misy anao ary hizara vaovao tsy azon'izy ireo avy amin'ny doka na printy nomerika.
Raha betsaka ny YouTube amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ireo mpanjifa misy sy mety ho mpanjifa, dia mila miomana amin'ny fifaninanana ianao. Manodidina ny 63% amin'ireo orinasa no efa nampiditra YouTube tao amin'ny paikadin'izy ireo, ary mbola hitombo izany isa izany.
Noho izany ny fampahalalana be dia be dia be amin'ny alàlan'ny tranokala amin'ny fotoana iray, dia saika tsy afaka mivoaka ilay izy. Manodidina ny 300 ora ny horonan-tsarimihetsika isaky ny minitra. Raha manao ny matematika ianao dia mihoatra ny 400,000 ora isan’andro izany ary eo aza ny 158,000,000 18,000 2018 ora isan-taona. Tokony handany XNUMX XNUMX taona hijery ny horonantsary YouTube ianao ho an'ny taona XNUMX fotsiny. Makà ny sary?
Hitanareo ny lalana andehanantsika; vakio ny antony valo lehibe manan-danja hahazoana mpamandrika maimaim-poana ao amin'ny YouTube.
Manorata manaraka kokoa
Ny antony voalohany amin'ny fahazoana ny mpanjifa maimaim-poana dia tsotra, te-hanangana fantsom-pifandraisana lehibe kokoa ianao! Na mpampiasa vaovao ianao, na angamba efa manana fantsona YouTube ianao nefa manana olana amin'ny fahazoana traction, mety ho lasa lavitra be ny mpanjifa bebe kokoa amin'ny famolavolana fiaraha-miasa matanjaka sy ny manaraka.
Ny algorithm an'i YouTube dia manome fantsom-pahalalana betsaka amin'ny mpanjifa amin'ny fampisehoana ny votoatiny amin'ny mpihaino malalaka kokoa. Izany dia miteraka fiatraikany amin'ny ririnina satria raha vao betsaka ny olona mahita ny fantsona anao, dia toa tsy maintsy misoratra ihany koa izy ireo.
Te ho voamarika amin'ny tranokalan'ny media sosialy hafa ianao
Ny ankamaroan'ny tranonkala media sosialy ao dia afaka mifandray miaraka amin'ireo mpampiasa tsirairay. Mora kokoa ny mizara votoaty manerana ny sehatra, ary mampitombo ny haben'ny mpihaino anao. Raha malaza amin'ny YouTube ny lahatsary iray, dia misy fety lehibe avoakan'ny mpanjifa handefa ilay horonantsary amin'ireo kaonty media sosialy hafa azy ireo. Mpanjifa bebe kokoa YouTube dia midika olona marobe izay afaka manampy amin'ny fanaparitahana ny horonantsary mankany amin'ny sehatra hafa. Tsy ho ela dia toa hita hatraiza hatraiza ny horonan-tsary, ary afaka miatrika viriosy mihitsy aza ianao.
Nofinofin'i YouTuber izany. Mandehana viral, jereo ny atiny ho hitan'ny olona an-tapitrisany, ary midira amin'ny tantaran'ny YouTube miaraka amin'ireo horonantsary mampiavaka antsika ankehitriny toa ny "Charlie Bit My Finger" sy ny "Harlem Shake." Mety ho toa ny “15 minitra nalaza fotsiny” io, fa raha ny tena izy, mpanjifa marobe no mijery vokatra ary mandray fanapahan-kevitra momba ny fividianana rehefa nahalala momba azy ireo tao amin'ny media sosialy.
Indraindray dia zava-miafina ny antony mahatonga ny zavatra sasany miparitaka, fa amin'ny ankapobeny, ny horonan-tsary avo lenta misy votoaty mamono olona dia mirona ho voamarika. Saingy, na manao ahoana na manao ahoana ny fandrafetana ny horonan-tsaryo, raha tsy manana isan'ny mpanjifa mendrika ianao, dia isalasalana fa misy olona hahita ny horonan-tsaryo. Ny fahazoana mpanaraka bebe kokoa dia midika fa ny fantsona YouTube-nao dia hiseho amin'ny “votoaty soso-kevitra” bebe kokoa an'ny YouTuber. Miala io fiantraikan'ny snowball io, ary alohan'ny hahafantaranao azy dia zarain'ny olona an-tapitrisany eran'izao tontolo izao ny horonan-tsary misy anao. Ny fahazoana mpanjifa YouTube maimaim-poana dia dingana voalohany fotsiny. Raha manapa-kevitra ny hividy mpanjifa YouTube ianao dia ataovy izay hividianana azy ireo amin'ny orinasa malaza efa niasa nandritra ny taona maromaro farafahakeliny ary manana laza amin'ny fandefasana serivisy avo lenta sy azo antoka.
Hiverina avy amina horonantsary vitsivitsy tsy dia fantatra
Tsara ny haino aman-jery sosialy satria manome feo ho an'ny olona rehetra eny ambonin'ny planeta izy io. Na iza na iza dia afaka mizara ny heviny amin'ny fanitika bokotra iray. Saingy amin'ny tsara, tonga ihany koa ny ratsy, ary ny mpampiasa dia manana fahaiza-manao lehibe kokoa amin'ny marika ratsy-vava miaraka amin'izao tontolo izao ho mpihaino azy. Raha nahazo fanehoan-kevitra ratsy ianao izay nandratra ny laharan'ny horonantsary, dia ny fampitomboana ny isan'ireo mpanjifanao dia hanampy anao hanoherana izany.
Antsoina hoe porofo ara-tsosialy izany, ary io no fomba ampianarin'ny olombelona ny tokony hatao sy ny tsy tokony hatao. Ny olona dia mirona kokoa amin'ny zavatra heverin'ny olona hafa koa. Ny mifanohitra amin'izany koa dia marina ihany koa; ny olona iray dia hitsara zavatra ho ratsy na tsy malaza raha mahita ny olon-kafa tsy ekeny koa. Ny mpanjifanao YouTube dia toy ny vatonao ho sitrakao, eritrereto izy ireo ho toy ny valin-kafatra. Na dia manana horonantsary vitsivitsy tsy tiana aza ny fantsona anao saingy manana mpanjifa betsaka, dia mpampiasa hafa dia hieritreritra fa malaza ny marinao, ary mety hamela heloka kely kokoa noho ny tsy tiana etsy sy eroa.
Ampitomboy ny maha-ara-dalàna ny marika
Fantsona YouTube misy mpanjifa vitsivitsy ihany no toa vaovao. Ny orinasam-barotra vaovao dia mbola mahasarika ny mpanjifa satria ny olona rehetra no te hahita voalohany amin'ilay toerana "it". Saingy, taorian'ny niorenan'ny vovoka raha tsy mbola nanao lisitra lisitry ny mpanjifa ianao dia hieritreritra ny olona fa misy zavatra tsy mety amin'ny marikao. Raha mahazo mpanaraka YouTube maimaim-poana ianao dia toa tsy ho ela intsony ny marika ataonao mba hanaovana anarana mendrika ho azy. Hanorina fitokisana amin'ny mpanjifanao izany ary hampitombo ny voka-droa hamidinao vokatra bebe kokoa ho an'ny orinasanao.
Ny YouTube manaraka anao dia tokony hofelarina
Tahaka ny fifandraisana rehetra, ny fananganana haino aman-jery sosialy manaraka aorian'ny fanoloran-tena. Matetika ny orinasa dia hanokan-tena amin'ireo mpikambana ao amin'ny fitantanana ny kaonty media sosialy. Saingy tsy miasa maimaimpoana ireo olona ireo. Ny fandraharahana dia miafara amina an'arivony dolara handoavana ny karama sy tombontsoa isan-taona, ary ny orinasa vaovao misy marika manify dia tsy mahatanty matetika.
Ny fikojakojana ny fisian'ireo haino aman-jery sosialy dia asa manontolo satria tsy ampy ny mandefa horonan-tsary amin'ny YouTube raha tianao ho voamarika. Mitaky fotoana sy hery hanamafisana sy hizara ary hanehoana hevitra, toy ny fijerena sy hifaneraserana amin'ny mpihaino anao, toy ny hoe tena olona ny asanao. Fa izany ny fifandraisana manokana izay mahatonga ny YouTube ho fitaovana sarobidy indrindra! Tsy misy fanontaniana ny orinasa tokony hataonao ao amin'ny YouTube; dia resaka fotsiny hoe ahoana no fomba hitondranao ny andraikitra.
Azonao atao ny mandray ilay tetikasa goavana, saingy manana zavatra ilain'ny mpandraharaha hafa ianao izay mitaky ny sainao. Ny fahazoana ireo mpanjifa YouTube maimaim-poana dia enta-mavesatra ny fananganana ny fisianao YouTube hatramin'ny fahatapahana ny sorokao. Azonao atao ny miala sasatra mora foana amin'ny fahafantaranao ny fikarakarana ireo mpanara-dia anao ary miverina amin'ny fijerena ireo hetsika fandraharahana manakiana.
Miseho avo kokoa amin'ny fikarohana
Efa niresaka momba ny fomba nahazoan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana YouTube tamin'ny mpanjifa maro izahay. Ny ampahany amin'izany dia misy ifandraisany amin'ny toerana misy ireo fantsona ao amin'ny fikarohana. Tahaka izany, andao lazaina fa manana trano fisakafoanana fantatra amin'ny fandrahoan-drongony ny vevy indrindra. Raha ny fantsona YouTube anao dia manana mpanjifa vitsy kokoa noho ny sombin-diloilo maintso eny an-tsena, ny horonan-dry zareo dia hiseho avo kokoa amin'ny fikatsahana noho ny anao, na dia afaka manova ny habibian'ny karnivora aza ny fahaizan'izy ireo. Noho izany, tsy maninona na dia tsara ihany aza ny votoatinao, miaraka amin'ireo mpanjifa ambany dia mitera-doza fa very asa amin'ny orinasa marika ambany kokoa.
Niasa mafy ho an'ny orinasanao ianao, ary te-hahazo antoka ianao fa voamarika. Ny fahazoana ireo mpandray anjara amin'ny YouTube dia hanampy amin'ny fiantohana ny marika anao eo an-tampon'ny lisitra amin'ny fikarohana, ary ny votoatinao dia manintona ny fifaninanana.
Tranga malaza ampiasain'ny kaonty an'arivony izany
YouTube dia fitaovana tena sarobidy ho an'ny mpivarotra. Ny fahazoan-dàlana amin'ny famandrihana fantsona dia toa ny olona misoratra anarana hijery ny vokatrao isan'andro. Tsy ny YouTube ihany no ampahany manan-danja amin'ny tetikady marketing fa ny fahazoana ny Mpanoratra YouTube maimaim-poana dia iray amin'ireo tsiambaratelo voatahiry tsara ao amin'ny orinasa. Ho gaga ianao amin'ny isan'ireo kaonty miaraka amin'ireo mpanohana sy mpanaraka tsy organika. Ireo maodely, mpamily racecar, eny fa na dia ny mpanao politika aza dia samy nahazo ny mpamoaka ny YouTube noho ny kaontiny ary nijery ny fantsona nampitombo ny lazany teo imason'izy ireo.
Ny ankamaroantsika dia nahazo crédit Ad tsy miankina amin'ny Facebook. Toy izany koa. Mieritrereta hoe mila maka tahaka ny manentana ny mpanaraka ao amin'ny Facebook ny roa tonta, izay fomba roa azo ampiasaina amin'ny fampitomboana ny mpanjifanao. Ny hany tsy mampitovy dia, ny fanamafisana ny lahatsoratra ao amin'ny Facebook sy ny tranokala hafa dia mampidi-doza satria tsy manana antoka ho an'ny mpanaraka anao ianao na koa fanao mahazatra.
Ampitomboy ny vola azo amin'ny sehatry ny asa
Toy ny mety ho fandraharahana rehetra, te hampitombo ny ambany ianao. YouTube no sehatra tonga lafatra hanodinana ireo mpividy mety ho mpanjifa amin'ny fiainana amin'ny alàlan'ny fizarana horonan-tsary momba ny marika. Samy mitarika an'izany rehetra izany. Miaraka amin'ny mpandray anjara amin'ny Youtube maimaim-poana, afaka manangana fanamafisana bebe kokoa ho an'ny orinasanao ianao. Avy any, afaka miely any amin'ny tranokala hafa toa ny Facebook ny horonan-tsary misy anao, ary afaka miely amin'ny viriosy ianao; ary manala ny marika anao amin'ny mpanjifa an-tapitrisany. Nojerenay ihany koa ny tombontsoa hafa, fa ny antony marim-pototra rehetra dia ny fitomboan'ny fidiranao amin'ny kaonty YouTube no hampitombo ny fidiram-bolan'ny orinasa.
Salama … Maimaimpoana izany!
Ny kisendrasendra no lohatenin'ity lahatsoratra ity izay nahaliana anao. Ny mpanjifa maimaim-poana amin'ny YouTube dia fahita tsy fahita firy, saingy misy orinasa mivoaka izay manome mpanjifa! Tsy bots fotsiny no mibaiko ny kaontinao; izy ireo dia tena mpampiasa manampy ny hampitombo ara-batana ny isan'ny mpanjifa ary hamoaka ny orinasanao any.
Ka inona ny dikan'izany ho an'ny orinasanao?
Izay lazain'i Susan Wojcicki dia tsy isalasalana fa marina; YouTube dia manana zavatra ho an'ny rehetra. Amin'ny maha orinasa azy ao amin'ny YouTube, na izany aza, tsy ampy izany raha te hanana zavatra olona , tokony hiezaka ny ho zavatra ianao rehetra . Hafahafa toa maheno azy io, ny YouTube dia lasa malaza kokoa noho ny fahitalavitra amin'ny tambajotra, ary na dia ny tariby aza. Ny mpampiasa dia mahatsapa fifandraisana tsy manam-paharoa amin'ny sehatra sy ireo fantsona izay arahin'izy ireo noho ny fijeriny akaiky azy ireo manome azy ireo ireo "fiainana" marika isan'andro. Ny fahazoana an-tserasera YouTube maimaim-poana no fomba tsara indrindra hitsambikina-panombohana ny fisianao YouTube ary sokafy ny varavarana hahombiazan'ny orinasa.
Raiso haingana ny mpanjifa YouTube maimaimpoana ary manomboka ny dianao mankany amin'ny lazan'ny YouTube anio!
XunXth June 27
Soso-kevitra amin'ny famoronana horonantsary lava-rambo misy fiantraikany amin'ny YouTube
Azo antoka fa manao onjam-peo amin'ny media sosialy ny YouTube Shorts. Saingy fantatrao ve fa maro ny olona saika mijery horonantsary lava lava? Ireo dia horonan-tsary YouTube lava be,...
XunXth June 20
Torolàlanao amin'ny fanombohana fantsona YouTube orinasa
Ny fantsona YouTube orinasa dia fantsona YouTube ho an'ny orinasa iray. Na dia tsy manavaka ny fantsona manokana sy orinasa aza ny YouTube, dia misy zavatra maromaro azonao atao...
Firy ny marika tokony hampiasainao mba hahitana tsara kokoa ny YouTube?
Tsy sehatra fandefasana horonan-tsary fotsiny intsony ny YouTube – lasa milina fikarohana ihany koa. Raha ny marina, ny sehatra an'ny Google dia faharoa amin'ny Google amin'ny resaka fikarohana...
Eto amin'ny SubPals, mirehareha amin'ny serivisy miavaka sy ny vidiny mora izahay. Aza raisina fotsiny ny teninay - jereo ny hevitray mpanjifa eto ambany.
Atolory ny hevitrao
Mpamorona votoaty aho, tena manampy tokoa izany satria nampian'ny Subpals mpanjifa ny fantsonako isaky ny 12 ora.
Ity tranonkala ity dia tsara ho an'ny youtubers mitombo izay mila fanentanana. Nanomboka tamin'ny mpanjifa 80 aho ary manana 500 izao.
Nitady toro-hevitra kely aho mba hahazoana mpanjifa amin'ny fantsona YouTube-ko amin'ny Internet rehefa tafintohina tamin'ny SubPals aho ary tena nanaratsy ahy, nihevitra fa ho fisolokiana izany. Soa ihany fa tsy izany ary afaka nahazo mpanjifa folo tsara aho tao anatin'ny minitra vitsy! Tena manoro hevitra aho, ankoatra izany dia azonao ampiasaina maimaimpoana indray mandeha isan'andro ny serivisy ;)
Tranonkala mahafinaritra, mahazo subs maimaimpoana ianao. Ary tsy misy viriosy koa. Tena mahafinaritra. Jereo ity tranokala ity. IZAO!
Serivisy tena tsara amin'ny vidiny tsara, tia ny modely mifototra amin'ny famandrihana. Ny fijery sy ny subs dia organika.
Manodidina ny antsasak'adiny vao mahazo fidirana amin'ny drafitra maimaim-poana, izay manome anao 10 subs isaky ny 12h, na dia mila manetsika azy amin'ny tanana aza ianao. Mahasoa ho an'ny olona vaovao maniry ny hampitombo ny fantsona yt. Mora ny mivezivezy ny tranokala.
Amin'ireo subs Youtube rehetra ho an'ny tranonkala sub any, ny Subpals dia tsy maintsy ho tsara indrindra, isaky ny 12 ora dia afaka manongotra mpanjifa 10 ianao izay tena rariny, azo antoka fa hisy olona tsy hisoratra anarana izay indrisy fa zavatra tsy azon'ny tranonkala toy ireny atao ny misoroka. , Efa nampiasa namana akaiky aho taloha ary avy amin'ny traikefako, io no fomba tsara indrindra hahazoana mpanjifa YouTube.
Tena mahagaga ny nahazo subs sy tia be dia be tsy mino fa tena misy ity tranokala ity fa tena miasa tsara.
Ny tsara indrindra tsara indrindra, atolotra ho an'ny rehetra. Ampiasao ny serivisiny, tena mahagaga. Mahazo misoratra anarana tsy tapaka amin'ny fantsonako aho..
Ny fomba tsara indrindra hahazoana mpanjifa ao amin'ny youtube dia naharitra ela fa mahasoa ary miasa ka manoro hevitra azy aho!
Tena misy ny mpanjifa izay azontsika avy amin'ny subpals.com. Manoro hevitra anao aho hiasa amin'ny subpals.com amin'ny fampiroboroboana ny fantsona YouTube. MISAOTRA
serivisy tsara. Miasa ny drafitra maimaim-poana
Serivisy tena tsara manampy ny fantsoko hitombo. Betsaka ny fanomezana isan-kerinandro izay tena mahavariana.
Ny fantsona youtube-ko JE Imposters dia nahazo mpanjifa be dia be avy amin'ny SubPals! Herinandro monja no nandefasako ary efa manana subs 30 aho! Toa mahagaga fa tena miasa ity tranokala ity ary tena manoro hevitra azy aho
Tena tsara, faly aho fa tena nanao izay nampiroborobo azy! Manome anao subs ao anatin'ny minitra vitsy izy ireo ary toa azo itokisana
sehatra lehibe indrindra ho an'ny vao manomboka!
Tiako loatra ity tranokala ity. Afaka mahazo mpanjifa maimaim-poana ianao amin'ny fanaovana j'aime sy famandrihana olona sasany.
Tena azo antoka ny fampiasana azy satria efa nampiasako nandritra ny tapa-bolana izao tsy misy olana. koa heveriko fa ny olona miezaka ny hitombo haingana kokoa dia tokony handeha hampiasa ity tranokala ity
Tena tsara, 100% atolotra, miasa tsara, raha te ho lehibe ianao dia ity ny tranokalanao. Manoro hevitra amin'ny youtube aho
Ny tranonkala tsara indrindra hatramin'izay! Hanandrana indray! Asio raha mila fanampiana amin'ny fantsonao ianao dia hanampy azy tanteraka izany!
Tena faly aho rehefa niditra tamin'ity tranokala ity. Ary izany no nanolorako anareo rehetra mba hiaraka eto.
Fampiharana mahavariana ity, manome anao subs maimaimpoana! Azo antoka fa hanoro azy ireo satria mety mahasoa tokoa ireo subs ireo.
Mahafinaritra! Manodidina ny 15 ny mpanjifa isaky ny mandeha ary 3 eo ho eo ihany no very. Niala 9 aho ka lasa 30 mahery kely tao anatin'ny 2 andro!
Ampitomboy mora foana ny fantsonao amin'ny alàlan'ny famandrihana olona fotsiny! Tena manoro hevitra anao aho hanandrana ity! Tsy hanenenana ianao ary manana serivisy tsara ity tranokala ity. Raha mividy famandrihana eto ianao toy ny orinasa na zavatra hafa, dia ho lasa malaza ianao ao anatin'ny fotoana fohy...
Service Fanombanana ny Channel YouTube ($ 120)
Fanombanana horonantsary lalina voarakitra ao amin'ny fantsonao YouTube + diniho ireo mpifaninana aminao + drafitra hetsika 5-dingana ho an'ireo dingana manaraka.
Fanombanana ny Channel feno
Torohevitra miavaka amin'ny fantsonao sy horonan-tsary
Avereno jerena ny paikadinao momba ny horonan-tsary sy votoatinao
Tsiambaratelo hampiroboroboana horonantsary & hahazo Subs
Fakafakao ny mpifaninana aminao
Drafitra hetsika 5-dingana amin'ny antsipiriany ho anao
Fotoana fandefasana: 4 ka hatramin'ny 7 andro
Service 1 YouTube Video SEO ($ 30) Video YouTube 3 SEO ($ 80) Video YouTube 6 SEO ($ 150) Video YouTube 12 SEO ($ 280)
Fanombanana feno ny horonantsarinao YouTube, ahafahanao manome anao Lohateny + Famaritana + 5 Keywords / Hashtags.
Fandinihana SEO Lahatsary feno
1 Lohateny nohatsaraina nomena
1 Fanatsarana azo omena omena
Teny lakile / tenifototra fikarohana 5
Service 1 Channel Banner Design ($ 80) Famolavolana Thumbnail Video 1 ($ 25) Famolavolana Thumbnail Video 3 ($ 70) Famolavolana Thumbnail Video 6 ($ 130)
Mpanoratra YouTube Channel Banner izay matihanina, nohavaozina tanteraka ary Thumbnails Video YouTube.
Kalitaon'ny endrika matihanina
Fomba ampifanarahana amin'ny marikao
Volavola matanjaka sy mahasarika
Habe sy kalitao sahaza ho an'ny YouTube
Hatsarao ny Click-Thru-Rate (CTR) anao
Fotoana fandefasana: 1 ka hatramin'ny 4 andro
Midira ao anatin'ny 1 Mihoatra YouTubers izay manentana mavitrika ny fantsony amin'ireo mpanjifa YouTube maimaim-poana!
Raiso ny sisin'ny fifaninanana miaraka amin'ireo mpanjifa YouTube maimaim-poana amin'ny alàlan'ny tambajotra fanaterana SubPals '!
... ary maro hafa!
Copyright © 2022 SubPals (subpals.com). Zo rehetra voatokana. Sitemap
Kilasy fampiofanana horonantsary
Login an'ny mpikambana
Fifanarahana fandaharana Affiliate
Ahoana ny fomba fitantanana ireo mpitsikera spam amin'ny kaontinao YouTube?
Fitakiana zon'ny mpamorona YouTube vs. Fitokonana YouTube